ShweMinThar: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို.မဟုတ် ) နေရာမှားပွင့်တဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို.မဟုတ် ) နေရာမှားပွင့်တဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင်.ပါတ်သက်လာလျင် အများအားဖြင်. အမြင်နှစ်မျိုး ၊ ရှုထောင်.နှစ်သွယ်ဖြင်.သာချဉ်းကပ်ကြတာတွေ.မြင်ရသည် ။ ထိုသဘောထားအမြင်နှစ်မျိုးမှာ သိပ်ပြီးအကောင်းမြင်လွန်းခြင်းနှင်. သိပ်ပြီးအဆိုးမြင်လွန်းခြင်းဖြစ်သည် ။ လူတစ်ရာလျင် (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်ဆန် ထောက်ခံကိုးကွယ်ကြသည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဝေဖန်သူသည် ဒီမိုကရေစီ ကိုမလိုလားသူ ၊ အမျိုးသားသစ္စာဖောက်ဘ၀သို. ကျရောက်သွားလေ.ရှိသည် ။ဤကားပထမအမြင်ဖြစ်ပေသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ( ၉ ) ရာခိုင်နှုန်းခန်.ရှိသော လူထုသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆန်.ကျင်ရေးသမားများဖြစ်သည် ။ သူတို.သည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်တွင်အဆိုးမြင်လွန်းသူများဖြစ်သည် ။ သူတို.ထဲမှအများစုမှာ ယခင်အစိုးရလက်ထက်က ရာထူး ၊အာဏာနှင်.လုပ်ပိုင်ခွင်.ကြီးကြီးရခဲ.ကြသူများ ၊ စစ်အစိုးရ၏ဒေါက်တိုင်များ ၊ တပ်မတော်သားအချို. ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီဝင် များ ၊ ဗုဒ္စဘာသာနှင်.ပါတ်သက်၍ အစွန်းရောက်မျိုးချစ်များဖြစ်သည် ။ သူတို.၏စွတ်စွဲချက်များ မှာ အများအားဖြင်. ဥာဏ်ပညာဖြင်.မယှဉ်သော တစ်ဖက်သတ်ဝါဒဖြန်.စကားများသာဖြစ်နေတတ်သည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆန်.ကျင်ရေးသမားတစ်ယောက်၏ လေသံကို ဥပမာအနေဖြင်. ခေတ္တခဏ နားထောင်ကြည်.ကြပါစို. ။ သူတို.ကအောက်ပါအတိုင်းပြောဆိုဝါဒဖြန်.လေ.ရှိပေသည် ။
“ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သမ္မတဖြစ်သွားပါက မြန်မာအိမ်ဖြူတော်တွင် နိုင်ငံခြားသား မိသားစု ချက်ခြင်း ရောက်လာတော့မည်။ နိုင်ငံတော် အခမ်းအနားများတွင် မြန်မာ စကားမတတ်သော ဒေါ်စု သားများ တောင်ရှည်ပုဆိုး မဝတ်တက်ဝတ်တက်ဖြင့် အခမ်းအနား တက်တော့မည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများဆုံး ပါဝင်သည့် NLD ပါတီမှ သမ္မတဖြစ်လာခြင်းကြောင့် လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်အရ နိုင်ငံအနှံ့ ဗလီများ မှိုလိုပေါက်လာတော့မည်။ OIC ရုံးဖွင့်ခွင့်ရသွားမည်။ ဘင်္ဂါလီများ ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်သွားကာ ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲတော့မည်။ လူ့အခွင့်အရေး အရ မယား ယူနိုင်သလောက် ယူကြတော့မည်။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးအရ ကလေး မွေးနိုင်သလောက် မွေးကြတော့မယ်။ မြို့တိုင်း၏ အလယ်တွင် ဗလီ များ နေရာယူလာကာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ မြို့ပြင် ရောက်သွားကြမည်။ (အခုတောင် မြို့အချို့မှာ ဖြစ်နေပြီးဖြစ်သည်)။ မြို့လည်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ပဌာန်းသံမကြားရတော့ ကြေးစည်သံမကြားရတော့။
ကုလားအော်သံတွေသာ ကြားရတော့မည်။ NLD မထောက်ခံသည့် အမျိုးစောင့်ဥပဒေမှာလည်း အလိုလို ပျက်ပြယ်သွားပြီး အမျိုး၊ ဘသာာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး ဆရာတော်များ ဖိနှိပ်ခံရကာ ဘာသာ၊ သာသနာ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်သွားမည်။ Time မဂ္ဂဇင်းသာမက ပြည်တွင်းမှာ အသစ်ထွက်ပေါ်လာမည့် ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံး တိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးများကို အကြမ်းဖက်သမား ဟု နေ့တိုင်း ဖော်ပြခံရတော့မယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ ဖျက်ဆီးခံရမည်။ ဘုန်းကြီးများ သတ်ခံရမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကျေးရွာများ မီးရှို့ခံရသည်။ မွတ်ဆလင်တို့ အနိုင်ကျင့်တာမခံနိုင်လို့ သွားတိုင်ပါက တရားသူကြီးချုပ် ဦးကိုနီ နှင့်တွေ့လိမ့်မည်။ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးတွေ တိုးတက်သွားပြီး အမျိုးသားရေးနဲ့ သာသနာရေးတွေ ထိုးကျသွားမည်။ သမ္မတကို စံယူ၍ မြန်မာအမျိုးသမီးများ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် လက်ထက်ခြင်းက အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့ အကြိုက်ဖြစ်လာမည်။ ရုပ်ဝတ္ထုတွေ များစွာ အဆင့်မြင့်သွားလိမ့်မည်။ စိတ်ဓာတ်တွေ ကတော့ အောက်ကျ သွားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာအမျိုးသမီးများ စိန်တွေ၊ ရွှေတွေ ဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံး အလှဆင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘာသာခြား မယားဖြစ်နေမည်။ ငွေကြေးတွေ ချမ်းသာသွားကြမည်။ စာရိတ္တတွေ ဆင်းရဲသွားကြမည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတသမ်းတမ်း ၅ နှစ်အတွင်း လွှတ်တော်ထဲက အင်အားအများဆုံး NLD ပါတီဝင်များ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်အပြီး ၂၀၂၀ တွင် သမ္မတအရည်အချင်း ကန့်သက်ချက်မှာ မရှိသလောက် ဖြစ်သွားတာကြောင့် တရုတ်၊ ကုလား၊ မည်သူမဆို မြန်မာနိုင်ငံတွင် သမ္မတလုပ်ခွင့် ရတော့မည်ဖြစ်သည်။
လွှတ်လပ်ရေးရပြီး ၆၇ နှစ်အကြာ တိုင်းတပါး၏ အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်တာ ပြန်လည် ခံရတော့မည်။ အရှင်းဆုံး နားလည်အောင် ပြောရလျှင် သင်တို့ ရေးထိုးမည့် လက်မှတ်တစ်ခုသည် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံအား နောင် အနှစ် ၂၀ အတွင်း ဘာသာ၊ သာသနာ ကွယ်ပျောက် ကာ တိုင်းတပါး ကျွန်ဘဝ အလိုလိုပြန်ရောက်သွားစေမည့် စီမံကိန်း အတွက် အထောက်အပံ့တစ်ခု ဖြစ်သွားလိမ့်မည် “
စသည်ဖြင်.ဖြစ်သည် ။ထိုအချက်များကို ကျွန်တော်သည် အယုံအကြည်မရှိပါ ၊ လက်သင်.လဲမခံပါ ။စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သောပညာတတ်တော်တော်များများကလည်းဤ၀ါဒဖြန်.ချက်ကိုလက်မခံပါ ။ ။အခြေအမြစ်မရှိလှသောလှိမ်.လုံးခြောက်လုံးမျာဖြင်. လူထုကို ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ကာ မရိုးမသားစည်းရုံးနေသည်ဟုမြင်ပါသည် ။
ထိုကဲ.သို. ထောက်ခံသူ ၊ဆန်.ကျင်သူ အုပ်စုနှစ်စုကြားတွင် အရေအတွက်နည်းပါးလှသည်. (၁) ရာခိုင်နှုန်းသော မြန်မာနိုင်ငံသားတို.မှာကား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင်.ပါတ်သက်လာလျင် အကောင်းမြင်လွန်းခြင်း ၊အဆိုးမြင်လွန်းခြင်း အစွန်းနှစ်ပါးမှကင်းဝေးကြသည် ။ သူတို.သည် အရှိကိုအရှိအတိုင်း သုံးသပ်၇ှုမြင်သော ဓမ္မဓိဌာန်ဝါဒီများ (၀ါ) Realists များဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်သည် အထက်ပါ ( ၁ ) ရာခိုင်နှုန်းသော သူများထဲတွင်ပါဝင်သည် ဟု ထင်ပါသည် ။ အောက်ပါအချက်များသည်ကျွန်တော် ဘယ်ဘက်မှမလိုက်ပဲမြင်သောအမြင်များထဲမှအချို.အချက်များဖြစ်ပါသည် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အားသာချက်တစ်ခုမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်နှင်.လက်ထပ်ခဲ.ခြင်းဖြစ်ပြီး ၊ အားနည်းချက်တစ်ခုမှာလည်းထိုအချက်ကြောင်.ပင်ပေါ်ပေါက်ခဲ.ပါသည် ။ ခေတ်သစ်မြန်မာ.သမိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၊ ဦးသန်. ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုသော သူရဲကောင်းသုံးယောက်ပေါ်ထွန်းခဲ.ရာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင်. ဦးသန်.ကိုကမ္ဘာကတုန်.ပြန်ပုံမှာ ခပ်မှန်မှန် ခပ်အေးအေးပင်ဖြစ်သည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လောက် အူလှိုက်သည်းလှိုက် အားပေးထောက်ခံမှုမရှိဟုဆိုလိုချင်ပါသည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခြင်း ၊ လက်နက်အားကိုးအနိုင်ကျင်.နေသော စစ်အာဏာရှင်များကို ရဲရဲဝံ.၀ံ. ဖီဆန်အံတုနေခြင်း ၊ မကြာခနနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရခြင်း ၊ ခင်ပွန်းနှင်.သားသမီးများကိုခွဲကာ မိသားစုအရေးထက် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကို ဘ၀နှင်. ပုံ၍ဆောင်ရွက်ခဲ.ခြင်း ၊ ပြည်တွင်းသို.ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင်.ငြင်းပယ်ခံရမှာစိုးသောကြောင်.ကွယ်လွန်အံ.ဆဲဆဲ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုပင် သွားရောက်ကြည်.ရှုခြင်းမပြုပဲ မြန်မာ ပြည်တွင်းမှမထွက်မခွာနေခဲ.ခြင်း ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘဲလ်ဆုရခြင်း များသည် ကမ္ဘာက လေးစားကရုဏာသက်ခဲ.ရသောအကြောင်းများဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော်.အမြင်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်၏ ဇနီးဖြစ်နေခြင်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွင် သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင်. အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ.သည်ဟုထင်ပါသည် ။
ပထမအချက်အနေဖြင်. စစ်အစိုးရသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ကိုင်တွယ်ရာ၌ ပြည်တွင်းမှအညတရ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားများကိုစိတ်ထင်တိုင်း ဖိနှိပ် ခြေမှုန်းခဲ.သလို လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ.ပဲ U.K နိုင်ငံမှ ၀င်ရောက်ကန်.ကွက် ရှုတ်ချလာမည်ကိုစိုးရိမ်စိတ်ဖြင်.မသိမသာ အခွင်.အရေးပေးထားခဲ.သည် ။ဦးဝင်းတင်အပါအ၀င် ထိပ်တန်း နိုင်ငံရေးသမားများ အား စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှလူမဆန်စွာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီး စစ်ကြောရေးစခန်းများ ၊ အကျဉ်းထောင်များ သို.ပိုဆောင်ခဲ.သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂျွန်ယက်တောအမှုတွင်ခေတ္တခဏ အင်းစိန်ထောင်အထူး အဆောက်အဦတွင် ကာလတိုထိမ်းသိမ်းခံခဲ.ရသည်မှတစ်ပါး မိမိအိမ်မှာပင် အကျဉ်းကျခံခဲ.ရသည် ။ အကျဉ်းကျနေစဉ် မိသားစုဆရာဝန်ဖြင်.ဆေးဝါးကုသခွင်.ရခဲ.သည် ။ နိုင်ငံတကာမှရံဖန်ရံခါရောက်လာသော အထူးဧည်.သည်တော်များနှင်.တွေ.ဆုံခွင်.ရခဲ.သည် ။ ဤအခွင်.အရေးများသည် သာမန်မြန်မာ နိုင်ငံရေးသမားများမရရှိသော အခွင်.ထူးဖြစ်သည် ။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မို.ထိုသို.သော အခွင်.အရေးများရခြင်းဟုပြော၍ရသော်လည်း စင်စစ် တွင် ဒေါက်တာမိုက်ကယ်အဲရစ်နှင်.ဆက်စပ်ပြီး United Kingdom အပါအ၀င် အနောက်ကမ္ဘာ နှင်.ပြသနာမတက်ချင်သော စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ အကြောက်တရားကြောင်.လဲပါပေသည် ။ ဥပမာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ခင်ပွန်းသာ ဦးဖြူ ဟုခေါ်သော မြန်မာတစ်ယောက်ဆိုပါစို. ၊ စစ်အစိုးရသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက် ဦးဖြူကိုအရင်ဆုံးဖမ်းဆီး နှိပ်စက်မည် ။ ဦးဖြူနှင်.ဒေါ်စု၏ သားနှစ်ယောက်ဖြစ်သော ကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက်ကို အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာဖမ်းဆီးမည် ။ စစ်ကြောရေးတွင်လူမဆန်စွာနှိပ်စက်မည် ။ နောက်ဆုံးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလဲဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ကာ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမည် ။ထောင်ထဲတွင် ကျန်းမာရေးစောင်.ရှောက်မှုမပေးပဲ နှိပ်စက်ညဉ်းပန်းခြင်းဖြင်. အခြား ရာပေါင်းများစွာသော မြန်မာအမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများလိုပင် ထောင်ထဲ၌ လူမသိသူမသိကွယ်လွန်ပေမည် ။
သို.သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထိုဒုက္ခများမကြုံတွေ.ခဲ.ရခြင်းမှာတရားဝင်လက်ထပ်ပေါင်းသင်းနေသော ခင်ပွန်းမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေခြင်းကြောင်.ဖြစ်သည် ။ ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်အဲရစ်ကြောင်.သာလျင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုဗဲဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီအပါအ၀င် အနောက်ကမ္ဘာမှ သတိထားမိလာကြခြင်းဖြစ်သည် ။ နောက်ပိုင်းတွင်တော. ကမ္ဘာ.မီဒီယာ Highlight ရကာ စစ်အစိုးရထင်သလိုလုပ်ခွင်.မသာခဲ.ခြင်းဖြစ်သည် ။စစ်အစိုးရ၏သဘောထားအမှန်ကိုသိလိုပါက ၂၀၀၃ ခု ၊ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားအသေသတ်ရန်ကြံစည်အားထုတ်ခဲ.ခြင်းကိုကြည်.ခြင်းဖြင်.သိနိုင်ပါသည် ။
ဤကား ဗြိတိန်နိုင်ငံသားခင်ပွန်းကြောင်.ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရရှိခဲ.သောအားသာချက်များဖြစ်သည် ။အားနည်းချက်များမှာကား စစ်အစိုးရနှင်.တကွ ဆန်.ကျင်ဖက်အုပ်စုများက မျိုးမစောင်.သူ ၊ နိုင်ငံခြားသားကိုလက်ထပ်သူ စသည်ဖြင်.ကြံဖန် ပြစ်တင်ဝေဖန်ကာ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တွင်ပင် ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ဖြင်. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ခွင်.မရအောင် ညစ်ခြင်းကိုခံနေရခြင်းဖြစ်သည် ။ သမာသမတ်ကျကျပြောရလျင် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်သည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပိုင်ခွင်.ရှိသည်ဆိုလျင် သမ္မတလဲဖြစ်ပိုင်ခွင်.ရှိစေရမည် ။ ပြည်ပစွက်ဖက်မှုဖြစ်လာလိမ်.မည်ဆိုသောအကြောင်းပြချက်သက်သက်ဖြင်. လူတော် လူကောင်းတစ်ယောက်ကို နိုင်ငံတော်က မဆုံးရှုံးစေသင်.ပါချေ ။သမ္မတလုပ်မည်.သူ၏မိဘနှစ်ပါးသည် မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်ဖြစ်ရမည်ဆိုလျင် လုံလောက်ပေပြီ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ခင်ပွန်းမှာလဲ ကွယ်လွန်ခဲ.ပြီဖြစ်၍ ကမ္ဘာကလက်မခံသော စည်းကမ်းချက်တစ်ခုကိုဖျက်သင်.ပါသည် ။
ရာဇ၀င်ထဲတွင်လူတော်များသည်တိုင်းပြည်အတွက်စွမ်းအားပြည်.ပေးဆပ်ခွင်.မရခဲ.ပဲ နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှု အကွက်ဆင်ချောက်တွန်းမှုများကိုသာကြုံတွေ.ခဲ.ကြရသည် ။ မြန်မာ.ရေတပ်ကိုခေတ်မီတပ်မတော်ဖြစ်စေချင်ခဲ.သော ကနောင်မင်းသားကြီးသည် တူတော်သူ မြင်ကွန်း ၊ မြင်းခုံတိုင်မင်းသားနှစ်ပါး၏ လုပ်ကြံမှုကြောင်. အသက်ပေးခဲ.ရသည် ။ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်လိုပညာရှိ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို အာဏာရအသိုင်းအ၀ိုင်းကချောင်ထိုးထားခဲ.ကြသည် ။ အောင်ဆန်းဆိုသောအလွန်ထက်မြက်၍ အလွန်တရာရိုးသားဖြောင်.မတ်သော လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးသည် ဂဠုန်ဦးစောဟူသော အာဏာရူး ၊မသမာသူတစ်ဦးလက်ချက်ဖြင်.ကျဆုံးခဲ.ရ၏ ။ ကမ္ဘာတွင်မြန်မာဟေ.ဟုဝင်.ကြွားနိုင်စေခဲ.သော ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဦးသန်.ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကလေးစားခဲ.သော်လည်း စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းကမနာလိုမုန်းတီးမှုများ ကြီးထွားခဲ.သည် ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ကမ္ဘာ.အလည်တွင်ဘာကြောင်. စူပါ ပါဝါအဖြစ်ရပ်တည်နေနိုင်သလဲဆိုတာသုံးသပ်ကြည်.သောအခါ မည်သည်.နိုင်ငံသား ၊ မည်သည်.လူမျိုး ၊မည်သည်.အသားရောင်ဆိုတာကိုမကြည်. တော်သူတတ်သူကိုနေရာပေးချီးမြှောက်ကြသဖြင်. အိုင်းစတိုင်းကဲ.သို. နိုင်ငံခြားသားများသည် အမေရိကန် သိပ္ဖံပညာရှင်များဖြစ်လာကြ၏ ။ ဂျာမန်ဆေးပညာနှင်. သိပ္ဖံပညာရှင်များကိုလက်ခံခြင်းဖြင်.အမေရိကန်ဆေးလောကနှင်.သိပ္ဖံပညာတစ်ခေတ်ဆန်းစေ၏ ။ လူမည်းများကိုကျွန်အဖြစ်မှလွတ်လပ်ခွင်.ပေးခဲ.သောသမ္မတလင်ကွန်းလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြောင်. ဘားရက်အိုဘားမားလို အာဖရိကန်သွေးနှောသော လူမည်းသမ္မတတစ်ယောက်အမေရိကန်မှာပေါ်ပေါက်လာ၏ ။အမေရိကန်သမိုင်းတွင်ပထမဆုံး အမျိုးသမီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ.သူ မယ်ဒလင်းအောဘရိုက်သည် ချက်ကိုဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ.ပြီး ၁၉၅၇ တွင်မှ အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူလာသူဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ.သော်လည်းတက္ကသိုလ်တွင် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ ပါမောက္ခဖြစ်ခြင်းစသော ထူးခြားသောအရည်အချင်းများကြောင်. အမေရိကန်ဆီးနိတ်လွှတ်တော်က ကန်.ကွက်သူမရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရာထူးပေးရန်ထောက်ခံခဲ.သည် ။အရာရာသည် သဘောထားကြီးမြတ်မှုနှင်.အမြင်ကျယ်မှုကိုသာအခြေခံကာ နိုင်ငံတော်တိုးတက်ကြီးပွားရလေသည် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာအမေ၇ိကန်တွင်လူဖြစ်ခဲ.ပါက အမေရိကန်စစ်တပ်နှင်.တကွ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုလုံးက သူ.အရည်အချင်းနှင်.သူရသတ္တိကြောင်. နိင်ငံအတွက်အသင်.တော်ဆုံးနေရာတစ်ခုကိုပေး၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပေလိမ်.မည် ။ မြန်မာပြည်မှာကား ဒဏ္ဍာရီထဲမှပန်းပဲမောင်တင်.တယ်တို.ခေတ်မှစကာ ယနေ.အချိန်အထိ အာဏာပိုင်တို.သည် ငါနှင်.မတူငါ.ရန်သူစာရင်းသွင်းနေခဲ.သောနိုင်ငံဖြစ်သဖြင်.တိုင်းပြည်ကောင်းကွက်ကားဖြစ်မလာနိုင်တော. ။တိုင်းပြည်အတွက်ထက် ငါတို.ပါတီ ၊ ငါတို.အုပ်စု၊ငါတို.အာဏာ အတွက်ပဲစဉ်းစားနေကြသော နိုင်ငံတွင် ဆရာဒဂုန်တာရာ၏မေ၀တ္တုဇာတ်သိမ်း ခန်းထဲကစာသားကိုသာပြန်၍ပြောရပေတော.မည် ။